Garawo Shaygosh Geesna Kama Soo Gasho – Rasaasa News
Garawo Shaygosh Geesna Kama Soo Gasho
Jul 13, 2010 Garawo Shaygosh Geesna Kama Soo Gasho
Waxaa baryahan wadayaasha qaar ka mid ah boggaga Internetka ee laga leeyahay dawlad degaanka Somalida ay aad u buunbuuniyaan sawirka Neef geel ah oo la yidhi waa hashii Garawo, taas oo ninkii lahaa markay dhimatay uu wax ka keenayba xabaalay. Maxaad ka og tahay Taariikhdii Hasha Garawo
Waxaa dhab ah in ay duugan tahay taariikh badan oo uu leeyahay degaanka Ismaamulka Somalidu, inta ay Somaliya qaadatay mooyee. Taariikhahaas dadan waxaa uu xil ka saaraan yahay aqoon yahanka u dhashay degaanka Somalida inta ay awoodoodu gaadhsiiso, masuuliyiinta dawlad degaanka Somalida iyo waliba dawlada federaalka ah. Taariikhda duungan ee uu leeyahay degaanka Somalidu waa dhaxalka barito ee jiilasha dambe ee degaanka Somalida.
Marka laga yimaado taariikhda guud ee qarsoon ee uu leeyahay degaanka Somalidu, ayaa hadan Gabalada Degaanka Somalida mid waliba waxaa uu leeyahay taariikh u gooniya oo lagu yaqaan.
Gabalada qaar ayaa waxay caan ku yihiin, hadalada Jaajaalaynta ah iyo ha lagaa sii sheego [laakiinta] in kasta oo gabalada degaanka Somalida oo dhan ay caan ku yihiin arintaas. Waxaa kale oo ay dadka degaanka Somalidu caan ku yihiin gabayga oo saddexdii ruux ee meel isugu timaadaba uu mid ka mid ah gabyo [3:1], waxaa kale oo ay dadka degaanka Somalidu caan ku yihiin deeqda iyo xaragada [martigaliyada Sayyid Maxamed Cali Qablax baa arintaas ka hadlay].
Hadaba, umma qaadan maanta qalinka in aan qoro taariikhda iyo dhaqamada dadka iyo degaanka Somalida, waxaanse jeclaystay in aan saxo laaxin uu qoray ruux wax ka qoray Hashii Garawo. Laaxinka uu qoray ayaa ah in uu qoray in Hasha Garawo laga lahaa degaanka gabalka dhagaxbuur, wuxuuna ku daray degmada Shaygosh degaamooyinka gabalka Dhagaxbuur. Runtuse waxay tahay in taariikhda hasha Garawo uu Ogadeen wada garanayo degaanka laga lahaa iyo ninkii lahaana labadaba, lagumana khaldami karo.
Gabalka Dhagaxbuur waxaa uu ka kooban yahay afar degmo waana gabalka ay ka soo jeedo hasha Garawo, khaasatan tuulada Digg, Dhagaxmadow oo ka tirsan gabalka Dhagaxbuur xitaal laguma khaldi karo.
Waxaana ka muuqda qoraaga taariikh uu sheego daaye in jecel yahay in uu shaki galiyo, demooyin uu ogg yahay meesha ay ka tirsan yihiin, haday gabal noqoto iyo hadii ay beel noqoto labadaba. Waxaana dhab ah in uusan garasho la,aan hadalka u odhan, balse dhawr sano ay beeshiisu ku sabaan baxday degaanka uu ku darayo gabalka Dhagaxbuur ee ah degmada Shaygoosh.
Waxaa kale oo deel qaaf ah, tixaha gabayda ah ee uu sheekada ku soo darsaday waxaa ka mid ah gabay uu tiriyey Ugaas Aw Yuuf Cali Xisri [Aw Yuusuf Bare [Guur aan ka la,aado], oo caan ka ah Somali oo dhan. Qoraagu waxaa uu jeclaystay in uu qalinka ku qariyo magaca Aw Yuusuf Bare oo ah gabyaa reer Shaygosh ah.
Waxaa haboon in qofku marka uu qalin qaato ee uu damco in uu wax qoro, waliba damco in uu taariikh sheego waxaa haboon in uu runta sheego maadaama ay dadku akhriyi wixii khaldamaan uu dib ugu soo noqon qoraaga.
Waxaan u qaatay in qoraagu uu qodobkan u qaatay kas iyo maag uuna ku jiro dagaal uu ku difaacayo Jwxo-shiil, isaga oo jooga Jijiga. Hadii ayna run ahayn waxaa looga baahan yahay raali galin.
Maxamuud Xuseen Raabi